को हो उपाध्याय, कसरी भए जैसी ? यस्तो छ – खत्री, क्षत्री र हमाल थरको रोचक प्रसंग – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाजको हो उपाध्याय, कसरी भए जैसी ? यस्तो छ – खत्री, क्षत्री र हमाल थरको रोचक प्रसंग
तर, अधिकांशलाई आफू कसरी यस जातिको वा यस थरको भएँ भन्ने थाहा छैन । सबै जातिका आ–आफ्ना संस्कार छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई यस्तो संस्कार कसरी सुरु भयो भन्ने थाहा छैन । यी सबै कुरा बुझ्न शर्माको यो किताब धेरै हदसम्म उपयोगी छ ।
जातप्रथाको जरा-हिन्दु धर्मशास्त्रले ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रलाई क्रमानुसार राखेका छन, जसलाई वर्णाश्रम व्यवस्था भनिन्छ । शास्त्रकारहरू एक जातिको पुरुषले अर्को जातिकी स्त्रीसित समागम गरेर सन्तान जन्माउँदा विभिन्न जाति उत्पन्न भएको तर्क गर्छन् । वर्णाश्रमअनुसार उच्च जातको पुरुषले निम्न जातकी स्त्रीसित विवाह गर्न सक्छ ।
‘उपाध्येको विधवा, जैसीको बिर्ता’-जस्तो कि ब्राह्मण पुरुषले रीत पुर्याएर मागी बिहे गरी ब्राह्मणी स्त्रीबाट जन्माएको सन्तान उपाध्याय ब्राह्मण नै हुन्छ । भगाएर ल्याएकी कुमारी बाह्मणी, विधवा ब्राह्मणी वा अर्काकी ब्राह्मणी, पुनर्विवाह भएकी ब्राह्मणी वा
वैकल्या (बिहेको कुरा छिनिएपछि अस्वीकृत भई बिहे नभएकी) बाट ब्राह्मणले जन्माएको सन्तान जैसी हुन्छ । वर्णाश्रम र लोक व्यवहारमा जैसीलाई दोस्रो दर्जाको ब्राह्मण मानिन्छ । अनि ब्राह्मण पुरुषले ठकुरी स्त्रीबाट जन्माएको सन्तान हमाल हुन्छ, क्षत्री स्त्रीबाट जन्माएको सन्तान खत्री हुन्छ ।
हमाल शासक वर्गकी स्त्रीबाट जन्मेकोले कुलीन क्षत्री मानिन्छ भने खत्री उच्च स्तरको क्षत्री । ब्राह्मणले वैश्य स्त्रीबाट जन्माएको सन्तान साधारण क्षत्री हुन्छ । जातको स्तर मान्ने हो भने ब्राह्मण समाजमा बाबुले यसरी ‘बदमासी’ गर्दा छोराको जात घटुवा हुने भयो ।
शूद्रलाई बिहे गरेचाहिँ ब्राह्मण पनि शूद्र नै र उसका सन्तान पनि शूद्र नै अर्थात् अछुत हुन्छ । राणाकालसम्म यस्ता ब्राह्मणलाई चारपाटे मुढेर, जुत्ताको माला लगाई गधामा उल्टो बसाएर डाँडा कटाउने चलन थियो ।जैसी समाज उपाध्यायको तुलनामा अलि उदार छ । यस समाजमा सजातीय स्त्रीसित जारी विवाह वा विधवा विवाह पनि स्वीकृत छ ।